Artificial Topography Topography Artificial - Imewe Mmewe
Topography Artificial Nnukwu ngwá ụlọ dịka olulu Nke a bụ ihe nrite iji nweta ihe nrite nke Grand Prize of Art na asọmpi mba ụwa. Echiche m bụ imeghe olu ya n'ime akpa iji wuo oghere amorphous dịka ọgba. Ọ bụ naanị ihe eji rọba eme ya. Ihe dị ka ibé akwụkwọ nke 1000 nke ihe dị larịị nke 10-mm ka egbutuwo ya n'ụdị ahịrị ma debekwa ya dịka stratum. Nke a abụghị naanị nka, kamakwa nnukwu arịa ụlọ. N'ihi na akụkụ niile dị nro dị ka sofa, onye na-abanyekwa n'ime oghere a nwere ike izu ike site na ịchọta ebe kwesịrị ekwesị maka ụdị ahụ ya.
Aha oru ngo : Artificial Topography, Aha ndị na-emepụta ya : Ryumei Fujiki and Yukiko Sato, Aha onye ahịa : .
Topography Artificial Ryumei Fujiki and Yukiko Sato Artificial Topography